Jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Gothenburg ayaa si heersare ah u soo dhaweysey halgamaa Caasha Xaaji Cilmi oo ku guuleysatey bilada RIGHT LIVELIHOOD-AWARD.
Caasho Xaaji, Ikraam, Sheekh C/rashiid iyo Odey Cosoble
Magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ayaa habeenkii ay taariikhdu ahayd 04-12-2008 lagu qabtey xaflad si heersara ah loo soo agaasimey oo lagu soo dhaweynayey marwo Caasho Xaaji Cilmi oo sanadkan ku guuleysatey bilada sharafta weyn huwan ee LIVELIHOOD-AWARD.
Caasho Xaaji Cilmi ayaa mudo aad u dheer ku howllaneyd daryeelka haweenka Soomaaliyeed iyo caruurtooda ee sida aadka ah ugu dhibaatoodey dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacey. Caasho Xaaji ayaa sidoo kale dadaal dheeri ah u gashey sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalka Soomaaliya iyada oo ka qayb gashey shirarkii dib u heshiisiinta ee ka dhacey Carta iyo Embegati, iyada oo kaalin lixaad leh ka qaadatey sidii ay isugu soo dhaweyn lahayd siyaasiyiintii shirarkaa ka qayb galey.
Kulankaa oo ay dadweyne fara badan ka soo qayb galey ayaa waxaa madasha kulanka xiriiriye ka ahayd suxufi Ikraam Cali Kaar waxeyna ugu horeyntii codbaahinta ku soo dhaweysey Sheekha magaalada Sheekh C/rashiid Maxamed oo kulanka ku furey aayado Quraan ah, kadib waxaa ereyo soo dhaweyn ah halkaa ka jeedyey gudoomiyaha gudiga qaban qaabada xaflada Cabdalla Aadan Xasan (Cabdalla Siyaasi) oo ah xildhibaan ka tirsan golaha degaanka magaalada Gothenburg.
Cabdalla Aadan (Cabdalla Siyaasi)
Soo dhaweyntaa kadib waxaa markale codbaahintii lagu wareejiyey Sheekh C/rashiid Maxamed oo halkaa ka soo jeediyey muxaadaro gaaban oo ka hadleysey dowrka dumarka ku leeyihiin Islaamka iyo qiimeynta waxa wanaagsan.
Muxaadaradaa kadib waxaa hadalkii qaatey odey Jaaliyada Soomaalida ee Gothenburg odey Cabdi Cosoble oo halkaa ka soo jeediyey khudbad mahadcelin iyo dhiirogelin u badnaa asaga oo Caasho Xaaji ku tilmaamey in ay tahay halgamaa mudan in lagu daydo.
Sacdiyo Furre oo buraanbur xiiso badan soo jeedisey
Intaa kadib waxaa mikrafoonkii lagu wareejiyey marwo Sacdiyo Fure oo halkaa ka soo jeedisey buraanburo xanbaarsanaa qiiro wadaninimo kuwasoo aad u kiciyey shacuurta dadkii shirkaa ka soo qaybgaley.
Ugu danbeyntii Ikraam Cali Kaar ayaa codbaayiyihii ku wareejisey marwo Caasho Xaaji Cilmi oo halkaa ka soo jedisey khudbad gaaban balse warbixin xoogan xanbaarsaneed. Caasho ayaa waxey ka hadashey howsha ay hayso iyo sababta ku qasabtey in ay u istaagto. Caasho ayaa ka sheekeysey qisooyin cajiib ah oo dadkii ka soo qaybgaley kulanka dareenkooda kiciyey, dhacdooyinka Caasho ka sheekeeesey ayaa gedigooda ahaa kuwo xanuun badan oo dumarka Soomaaliyeed qabsadey mudadii dagaalka sokeeye wadanka ka jira ilaa iyo hadda uu ay ciidamada dalka Itoobiya ka geystey dalkii hooyo xadgudubyo ka baxsan xaquuqda bani’aadanka kuwasoo si aad ah u saameeyey guud ahaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda jilcan sida waayeelka caruurta iyo dumarka.
Cabdi Beenoos, Cabdalla Siyaasi, Caasho Xaaji, Cabdulahi Black, Sacdiyo iyo Ikraam
Caasho Xaaji Cilmi iyo qaar kamid ah dumarkii kulanka ka soo qaybgaley
Caasho ayaa ka warbixisey howlaha samafal uu ururka ay madaxda ka thay ee SSWC ay wadanka ka geysteen mudadii 10 sano ee ugu danbeysey, dhinaca waxbarashada, caafimaadka iyo weliba ka shaqeynta nabada.
Ilyaas Maxamuud iyo Caasho Xaaji
Canab Axmed, Caasho Xaaji iyo Caasho Cadnaan
Ugu danbeyntii waxaa shirkii soo gunaanudey Sheekh C/rashiid Maxamed asaga oo Caasho ugu duceeyey in howlaha ay u hayso dadka tabarta yar in uu Illaah ku garab galo.
W/D: Ilyaas Maxamuud Xuseen